Wiilashii weeraray ninkii nabiga aflagaadeeyay oo la xukumay | Somaliska
Labo wiil oo walaalo ah oo lagu eedeeyay in ay dab qabadsiiyeen guri uu degenaa ninkii aflagaadeeyay rasuulka (scw) ayaa maxkamadi ku xukuntahay 3 sano kan weyn iyo 2 sano kan yar. Markii maxkamadu furantahay arbacadii la soo dhaafay ayaa wiilka weyn uu ku sheegay ninka nabiga aflagaadeeyay " Waa cadowga ilaahey, waa cadowga rasuulka, waana cadowga Muslimiinta". Asagoo intaas ku daray waa "Waa cadowga ugu weyn ee Islaamka" Labada wiil ayaa magacyadooda lagu sheegay Mentor oo 21 jir ah iyo Mensur 19 jir. Labada walaalo ayaa haysta dhalasha Iswiidhan ayagoo ka soo jeedaa asalkooda Kosavo. Labada wiil ayaa diiday in ay khirtaan dambiga lagu soo oogay waloow dhaawacyo dab ah laga helay wiilka weyn asagoo sheegay in uu ku gubtay wax karis. Wiilasha ayaa la soo xiray bishii May ee sanadkaan ka dib markii guriga uu degenaa ninkii nabiga aflagaadeeyay Lars Vilks dab la qabadsiiyay. Dhaliil ayaa loo jeediyay xukunka dheer ee wiilashaan la siiyay ayadoo la ogyahay in ay iswiidhan xukunadeedu gaabanyihiin oo mararka qaar qof dad dilay lagu xukumo dhowr sano oo keliya. The Local
Labo wiil oo walaalo ah oo lagu eedeeyay in ay dab qabadsiiyeen guri uu degenaa ninkii aflagaadeeyay rasuulka (scw) ayaa maxkamadi ku xukuntahay 3 sano kan weyn iyo 2 sano kan yar.
Markii maxkamadu furantahay arbacadii la soo dhaafay ayaa wiilka weyn uu ku sheegay ninka nabiga aflagaadeeyay ” Waa cadowga ilaahey, waa cadowga rasuulka, waana cadowga Muslimiinta”.
Asagoo intaas ku daray waa “Waa cadowga ugu weyn ee Islaamka”
Labada wiil ayaa magacyadooda lagu sheegay Mentor oo 21 jir ah iyo Mensur 19 jir.
Labada walaalo ayaa haysta dhalasha Iswiidhan ayagoo ka soo jeedaa asalkooda Kosavo.
Labada wiil ayaa diiday in ay khirtaan dambiga lagu soo oogay waloow dhaawacyo dab ah laga helay wiilka weyn asagoo sheegay in uu ku gubtay wax karis. Wiilasha ayaa la soo xiray bishii May ee sanadkaan ka dib markii guriga uu degenaa ninkii nabiga aflagaadeeyay Lars Vilks dab la qabadsiiyay.
Dhaliil ayaa loo jeediyay xukunka dheer ee wiilashaan la siiyay ayadoo la ogyahay in ay iswiidhan xukunadeedu gaabanyihiin oo mararka qaar qof dad dilay lagu xukumo dhowr sano oo keliya.
waa ku racsanaay wilashaan wana wax wajiib ku ah qof kasto oo islaam eh wana in la gubaa qofkii rasulkenaa scws wax ka shegaa wana dilii donaa insha alaah qofkii wax yabahaas oo kale sameyaa insha alaah